Version 0.7.3 – Shortcodes fanohanana
Martsa 25, 2011 amin'ny tolotra 55 Comments
Ankehitriny dia efa namoaka dikan- 0.7.3 izay manampy fanohanana shortcodes ao WordPress Lahatsoratra, Azo ampiasaina izany mba hanao zavatra sasany, ary milamina izay efa nahary ny lahatsary etsy ambony, ka raha afaka dimy minitra, ary na inona na inona tsara kokoa hanao, Jereo ny lahatsary fotsiny. Raha tsy izany dia ho recommand mamaky ny tahirin-kevitra amin'ny http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Fixes bibikely bebe kokoa nanampy ho famotsorana izany, tena mampihena ny entana (ary duplications) fa mety hamorona bots ao amin'ny pejy Ovay, ary hanafoana ny raki-daza ho an'ny fivoriana unneeded bots.
Ankafizo io dikan-!
Nametraka Under: General Messages Tagged Miaraka: 0.7, tsy ampy taona, fanafahana, shortcodes, Video, WordPress plugin
Version 0.7.0 – Ny ho avy ny fandikan-teny interface tsara!
Janoary 12, 2011 amin'ny tolotra 3 Comments
Lehibe manaraka dikan famotsorana an'i Transposh dia eto, ary fankalazana ny fotoana efa namorona lahatsary fohy (ny 11 minitra) . Fampidirana ny endri-javatra vaovao ao amin'ny vaovao misy dikan-. Kokoa noho ianao nandray ny hijery ny lahatsary sy ny hanendry azy ho any amin'ny akademia manaraka loka ho an'ny fandikan-teny loka plugin sarimihetsika vaovao.
Ny zavatra voalohany ho tsikaritrao ao amin'ny dikan-vaovao no vaovao lehibe ho an'ny mpampiasa interface tsara, efa nanampy roa lafiny tena nangataka ny interface tsara toy ny manaraka / aloha bokotra, fankatoavana ny fandikan-teny sy ny fitadiavana automated andian-teny izay nadika. Lafin-javatra iray hafa mahaliana koa fa dia ny fahafahana ho an'ny mpandika teny tany am-boalohany ny nahita fehezan-teny amin'ny teny hafa raha efa voadika amin'ny fiteny hoe: tanana, ka mihevitra ho manana bilaogy Hebreo izay nadika amin'ny teny anglisy, mpandika teny dia mety ho afaka handika ny toerana avy amin'ny teny anglisy ho fiteny hafa, izay mety ho mora kokoa ho azy. Tiako ny hisaotra Hanan fa mangataka am-boalohany izany endri-javatra. Azo atao koa ankehitriny mba hanesorana ny fandikan-teny avy amin'ny diniky ny tantara, izay dia dingana eo amin'ny fitarihan'ny miasa amin'ny fanaraha-maso hentitra amin'ny fandikan-teny tsara.
Koa ny interface tsara sleeker, amin'ny tsara fanahy kokoa izany ihany koa UI localizable sy themable, dia afaka nametraka ny foto-kevitra ao amin'ny toe-javatra filatro, ary ho tsara toerana mba hahazo mafy ny fomba dia mijery dia themeroller. Raha te-hanampy antsika amin'ny alalan'ny fandikana ny interface tsara ny teny sy ny fahazoana ny nahazoan-dalana ho azy, masìna ianao, aoka hahafantatra amin'ny alalan'ny fampiasana ny fifandraisana antsika safidy ambony.
Ny fitaovam-piadiana dia mbola eo amin'ny hazakazaka fandrosoana, ary Transposh no voalohany plugin (fa fantatsika ny) ny fanohanana (tena manohana, miasa fanohanana) fa 60 fiteny amin'ny fampidirana ny Esperanto fanohanana mampiasa Apertium maotera, fa ankehitriny ihany no miasa ho an'ny Anglisy sy ny Espaniola bilaogy, fa dia hanampy bebe kokoa amin'ny fangatahana fiteny.
Raikitra ny maro hafa tafiditra, banky angona fanavaozam-baovao, ny ela mitady fanalahidy Meta fandikan-teny, ary kokoa – famaranana ~ 15 tapakila eo amin'ny Trac.
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay – ny nahazoan-dalana ho an'ny mpandika teny ao amin'ny fanafahana izany any amin'ny: Amir ny fandikan-teny ny teny hebreo sy ny Ignacio fa ny fandikan-teny espaniola, misaotra ry zalahy!
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: 0.7, apertium mandika, tsy ampy taona, fiteny maro, fanafahana, themeroller, UI, Video